Shiinaha Portabel Alluvial Placer Dahab Dahab Warshad Trommel Sluice Box warshad iyo alaableyda | Kordhi
Burburinta Double Rullaluistemadka
Double Heer Hammer burburi
Xuddunta Saamaynta Saamiga Vertical
Warshad Mashiinka Guurguura
Stone Mashiinka Mill shiidi
Dahab Qoyan oo Dahab ah
Warshad Dhaqida Dahabka
Warshadda Dahabka Dahabka
Sanduuqa Dahabka Dahabka ah
Isku Soo uruurinta Dahabka Centrifugal
Mashiinka Dahabka Kacha
Haanta Mashiinka Mashiinka
Foornada dhalaalaysa korontada
Gold Mercury Amalgamator Foosto
Mashiinka Mashiinka ee gariirka
Shaashadda Rotary Trommel
Portabel Alluvial Placer Dahab Dahab ah Trommel Sluice Box
Warshad dhaqida ee Gold Trommel way fududahay in la dhaqaajiyo oo la rakibo, awoodgeeduna wuxuu gaari karaa 300 tan / saacadii. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo celiyo walxaha dahabka ah ee alluvial ama placer ee ciidda madow.Waxay kaliya isticmaashaa biyaha iyo awoodda korantada iyada oo aan kiimiko ku lug lahayn, markaa ma jiraan wax wasakh ah oo deegaanka ku xeeran ah.
Waxaa sidoo kale dib loo naqshadeyn karaa shuruudaha gaarka ah ee macaamilka, mashiinnada kale iyo qalabka si fudud ayaa loogu rakibi karaa warshadda si loo kordhiyo heerka soo-kabashada iyo in la gaaro wax-qabad sare. Sida miiska ruxaya, sanduuqa dhagxaanta iyo iwm.
Warshadda dahabka lagu dhaqo waa geed dhammaystiran oo go'an oo ay ku jiraan quudinta quudinta, shaashadda trommel ee wareega ama shaashadda birqaya (waxay kuxirantahay xaddiga dhoobada ee ciidda), bamka biyaha lagu rido iyo nidaamka buufinta biyaha, isku-uruuriyaha dahabiga sanduuqa celiska, sanduuqa dhagxanta iyo sanduuqa dhagxaanta oo go'an , iyo foosto amalgamator meerkuri iyo foornada dhalaalida dahabka induction.
Iyada oo ku saleysan shuruudahaaga farsamo, waxaan qaabeyn karnaa oo dhisi karnaa warshad si aan u beegsanno macdantaada. Haddii aad rabto caawimaad si aad u hesho dejinta dhirtaada goobta iyo ka shaqeynta, waxaan ku siineynaa adeegyadaas iyada oo ku saleysan tobannaan sano oo ka mid ah qoditaankayaga guuleysta.
Faa'iidooyinka Qalabka Trommel Dahabka ah
1.Waa ikhtiyaar dhaqaale oo aad uqurux badan oo sifiican ugufilan waxsoosaarka mugga yar iyo weyn.
Shaashadda waxay ka kooban tahay miirayaal kala duwan oo durbaanno kala duwan oo culus ah oo hubinaya kala-soocidda qalabka wanaagsan.
Naqshadeynta waxay leedahay dabacsanaan isticmaale dhamaadka ah oo u oggolaaneysa bedelka shaashadda iyadoo kuxiran cabirka mesh
Lakabyada 4.Multiple ee shaashadda si kor loogu qaado habka kala sifeynta.
Waxay ka kooban tahay taargooyinka shaashadda oo la beddeli karo si qaybo duug ah loo beddelo.
6. Shaashadda Trommel waxay leedahay waxtar sare iyo awood weyn oo loogu talagalay maadooyin kala duwan
Shaashadda waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu fududeeyo awoodaha sare, in la bixiyo nolol shaashad dheer oo laga fogaado waxyaabaha wax xiraya.
QIIMEYNTA QALABKA KA-SOOBIDDA DAHABKA EE MAASHAQADA KALA-SAARKA DAHABKA
Model GTS20 GTS50 MGT100 MGT200
Cabir / mm 6000x1600x2499 7000 * 2000 * 3000 8300 * 2400 * 4700 9800 * 3000 * 5175
Awood 20-40 50-80 tph 100-150 tph 200-300 tph
Awood 20 30 kw 50 kw 80 kw
Shaashadda Trommel / mm 1000x2000 φ1200 * 3000 -1500 * 3500 φ1800 * 4000
Sanduuqa Sluice 2 dhigay 2 nooc 3 nooc 4 nooc
Biyo Siinta / m³ 80m³ 120 m³ 240 m³ 370 m³
Heerka Soo-kabashada 95% 98% 98% 98%
Nidaamka Shaqada ee Warshadda Dhaqidda Dahabka
Ka dib markaad dhamayso dhammaystirka geedka oo dhan. Badanaa isticmaal qod-qod ama xamuul-bixiye si aad ugu quudiso ciidda webiga qoob-ka-gooye, ka dib ciiddu waxay aadeysaa shaashadda trommel. Marka shaashadda wareega ee trommel wareegeyso, cabbir weyn oo ka badan ciid 8mm ah ayaa la baari doonaa, cabbirro yar yar oo ka hooseeya 8mm ayaa aadaya isku-uruuriyaha dahabiga dahabiga ah ama biraha dahabiga ah ee birqaya (sida caadiga ah waxaan kugula talineynaa isku-urursade, maxaa yeelay waxay ku guuleysan kartaa heerka soo-kabashada sare ee kuwa kala duwan) cabbirrada walxaha dahabka ah laga bilaabo 40 mesh ilaa 200 mesh). Wax-soo-uruuriyaha ka dib waa jeex-jeex dahabi ah oo ay weheliso buste dahab ah, taas oo loo isticmaalo in lagu soo celiyo dahabka hadhay ee ku urursan.
Isku soo uruurinta dahabiga dahabiga ah
Isku soo uruurinta dahabiga dhexe ee dahabiga ah waa inay adeegsato cuf isjiidadka cufka dhexe si ay u ururiyaan uruurinta dahabka ee ciidda webiga ama ciidda, waxay ku habboon tahay in laga soo qaado cabbirka mesh dahabka laga bilaabo 200 mesh illaa 40 mesh, heerka soo kabashada ee walxaha dahabka bilaashka ah wuxuu gaari karaa sare illaa 90 %, waa lammaane kaamil ah oo la shaqeeya warshadda shaashadda trommel ee dahabka ah.
Dheecaanka Dahabka ah ee Buste leh
Ka dib marka la soo ururiyo waxyaabaha urursan ee dahabka laga soo uruuriyo iyo buste dhegta dahabka ah, habka ugu caamsan ayaa markaa la saaraa miiska ruxaya si loo sii wanaajiyo darajada dahabka.
Fuustada Isku Darka Mercury Ama Ball Ball Yar
Dahaarka macdanta ee dahabka laga soo ururiyey miiska ruxitaanka waxaa lagu ridi doonaa godka yar ee kubbadda, ama waxaan ugu yeernaa foosto isku darsamida itmercury. Kadibna waxay ku dhex qasan kartaa meerkuriga waxayna sameysan kartaa isku dar dahab iyo meerkuri ah.
Foornada Dahabka Dahabka ah
Kadib markaad hesho isku darka dahabka iyo meerkuriga, waxaad ku ridi kartaa foornada dhalaalaysa dahabka oo kululeynaya, markaa waxaad heli kartaa baarka dahabka saafiga ah.
Kala soocida meerkurida Dahabka ah
Kalasooca meerkuriga kala qaybiya waa aaladda kala sooca meerkuriga iyo dahabka. Mine Gold Mercury Distiller waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadda yar ee macdanta dahabka uumiga Hg ee Hg + isku darka dahabka, iyo sifeynta dahabka saafiga ah.Sababtoo ah heerkulka gaaska meerkurida wuxuu ka hooseeyaa barta dhalaalka iyo barta karkarta ee dahabka. Waxaan si caadi ah u adeegsanay habka kala-saarista si aan u kala soocno dahabka iyo walxaha 'amalgam mercury'.
Hore: Macdanta Rock Ore shiidi Mashiinka Ball Powder Mashiinka Mashiinka
Xiga: Siman Iyo Ilkaha Nooca Double Rullaluistemadka Burburi
Warshad Dhaqida Ciidda Dahabka ah ee Dahabka ah
Dahab Dahab Dahabka Warshad
Warshad Dhaqida Cuf-is-weydaarsiga Dahabka
Warshad Dhaqida Dahabka Trommel
Warshad dhaqid Dahab ah oo la qaadan karo
Ka tag fariintaada:
Qodista Macdanta Qoyan Mil Mill Gold Cufka Kala ...
Alluvial Placer Dahab Daab Plant Xooga ...
Aagga Teknolojiyada Sare, Magaalada Zhengzhou, Shiinaha
Weydiimaha ku saabsan badeecadeena ama liiska qiimaha, fadlan noo dhaaf emaylkaaga ama si toos ah noola soo xiriir whatsapp +86 18221130967.
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir.